हिब्रू १२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१२ त्यसैले हाम्रो वरपर साक्षीहरूको यति बाक्लो बादल भएकोले आओ, हामी पनि हर किसिमका बोझ र हामीलाई सजिलै अल्झाउने पापलाई पन्छयाएर हाम्रो अगाडि राखिएको दौड धैर्य गरेर दौडौं। २ अनि हाम्रो विश्वासको मुख्य माध्यम र यसलाई पूर्ण तुल्याउनुहुने येशूलाई एकटक लगाएर हेरौं। किनकि उहाँले आफ्नो अगाडि राखिएको आनन्दका लागि बेइज्जतीको समेत वास्ता नगरेर यातनाको खम्बामा* मृत्यु सहनुभयो र उहाँ परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि बस्नुभएको छ। ३ हो, जसले पापीहरूले आफ्नै हानि हुने गरी उहाँविरुद्ध बोलेका त्यत्ति धेरै कुरा सहनुभयो, उहाँलाई ध्यान दिएर हेर। यसो गऱ्यौ भने तिमीहरू थाकेर हरेस खानेछैनौ। ४ आफ्नो रगत बगाउनुपर्ने स्थितिसम्म पुग्ने गरी तिमीहरूले पापको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपरेको छैन। ५ तर तिमीहरूलाई छोराहरू भनेर सम्बोधन गर्दै दिइएको यो अर्तीलाई तिमीहरूले पूरै बिर्सेका छौ: “हे मेरो छोरा, यहोवाले दिनुहुने अनुशासनलाई हलुका नसम्झ, न त उहाँले सुधार्नुहुँदा हरेस खाऊ; ६ किनकि जसलाई यहोवा प्रेम गर्नुहुन्छ, उसलाई अनुशासन दिनुहुन्छ। हो, आफूले छोराको रूपमा स्वीकारेको हरेकलाई उहाँ कोर्रा लगाउनुहुन्छ।” ७ अनुशासन पाउनका लागि तिमीहरू यी सबै सहँदैछौ। परमेश्वरले तिमीहरूसित छोराहरूसित झैं व्यवहार गरिरहनुभएको छ। कुनचाहिं छोरालाई बुबाले अनुशासन दिएको हुँदैन र? ८ सबैले पाएको अनुशासन यदि तिमीहरूले पाएका छैनौ भने वास्तवमा तिमीहरू छोराहरू नभई नाजायज सन्तानहरू हौ। ९ साथै, हामीलाई जन्म दिने बुबाले हामीलाई अनुशासन दिन्थे अनि हामी तिनको आदर गर्थ्यौं। त्यसोभए, जीवित रहिरहन के हामी त्यस बुबाको अधीनमा बस्नुपर्दैन र, जसले हामीलाई पवित्र शक्तिले नियुक्त गरेर जीवन दिनुभयो? १० किनकि तिनीहरूले त आफूलाई जस्तो उचित लाग्यो त्यसैअनुसार हामीलाई केही समयका लागि मात्र अनुशासन दिए, तर उहाँले भने हामी उहाँको पवित्रताको भागीदार हुन सकौं भनेर हाम्रै फाइदाको लागि अनुशासन दिनुहुन्छ। ११ हो, कुनै पनि अनुशासन हालको लागि रमाइलो हुँदैन तर दुःखलाग्दो हुन्छ, तैपनि ज-जसले यसद्वारा तालिम पाइसकेका छन्‌, तिनीहरूका लागि यसले पछि गएर शान्तिले भरिएको फल फलाउँछ अर्थात्‌ तिनीहरूले परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्नेछन्‌। १२ त्यसैले कमजोर हात र दुर्बल घुँडाहरू बलिया बनाओ १३ अनि आफ्नो खुट्टाको निम्ति सीधा बाटो बनाइरहो, ताकि जुन अङ्ग कमजोर छ, त्यो जोर्नीबाट नफुस्कोस् तर निको होस्। १४ सबै मानिससित शान्ति कायम गरिरहो र पवित्र रहिरहो, जसविना कसैले पनि प्रभुलाई देख्नेछैन। १५ तिमीहरू असाध्यै होसियार बस, ताकि परमेश्वरको असीम अनुग्रहबाट कोही पनि वञ्चित नहोस् अनि कुनै विषालु जरा उम्रेर समस्या खडा नगरोस् र धेरै जनालाई अशुद्ध नबनाओस्। १६ साथै, अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने कोही नहोस्, न त एक छाक भोजनसित आफ्नो ज्येष्ठ-अधिकार साट्ने एसावजस्तो पवित्र कुराहरूको कदर नगर्ने कोही होस्। १७ किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ, पछि तिनले आशिष्‌ पाउन खोज्दा तिनी तिरस्कृत भए। तिनले रोइकराइ गरेर आफ्नो बुबाको फैसला बदल्न खोजे तापनि त्यसो गर्न सकेनन्‌। १८ तिमीहरू त्यसको नजिक पुगेका छैनौ, जसलाई छुन सकिन्छ, जो आगोमा दनदनी बलिरहेको छ, न त तिमीहरू कालो बादल, घोर अन्धकार र आँधीको नजिक नै पुगेका छौ। १९ न तिमीहरूले बिगुलको चर्को आवाज र कसैको सोर सुनेका छौ, जुन सोर सुन्दा मानिसहरूले अब सुन्न पुग्यो भनेर बिन्ती गरेका थिए। २० किनकि यो आज्ञा सुनेर तिनीहरू असाध्यै डराएका थिए: “यदि कुनै पशुले यस पर्वतलाई छोयो भने त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नू।” २१ साथै, त्यो दृश्य यति भयावह थियो कि मोशाले यसो भने: “म डरले थरथर कामिरहेको छु।” २२ तर तिमीहरू सियोन पर्वतनजिक, जीवित परमेश्वरको सहर, स्वर्गको यरूशलेमनजिक, लाखौं-लाख स्वर्गदूतको २३ भेलानजिक अनि स्वर्गमा दाखिल भएका जेठा सन्तानहरूको मण्डलीनजिक पुगेका छौ। अनि परमेश्वरसामु पुगेका छौ, जो सबैका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँको पवित्र शक्तिद्वारा नियुक्त भएका ती असल मानिसहरूनजिक पुगेका छौ, जो पूर्ण बनाइएका छन्‌। २४ अनि नयाँ करारका मध्यस्थकर्ता येशूनजिक र उहाँले छर्किनुभएको त्यस रगतनजिक पुगेका छौ, जुन रगत हाबिलको रगतभन्दा उत्तम तरिकामा बोल्छ। २५ जो बोलिरहनुभएको छ, उहाँको कुरा सुन्न इन्कार नगर्न होसियार बस। किनकि पृथ्वीमा परमेश्वरको चेतावनी जसले सुनाए, तिनको कुरा सुन्न इन्कार गर्नेहरू त बचेनन्‌ भने जो स्वर्गबाट बोल्नुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्न इन्कार गऱ्यौं भने हामी झनै कहाँ बचौंला र! २६ त्यतिबेला उहाँको सोरले गर्दा पृथ्वी काम्यो तर उहाँले अहिले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ: “अर्को एकपटक म पृथ्वीलाई मात्र होइन तर स्वर्गलाई पनि हल्लाउनेछु।” २७ “अर्को एकपटक” भन्ने भनाइले यो देखाउँछ कि हल्लाइने कुराहरू अर्थात्‌ बनाइएका कुराहरू हटाइनेछन्‌, ताकि नहल्लाइने कुराहरू सधैंका लागि रहिरहून्‌। २८ त्यसैले, हल्लाउन नसकिने राज्य हामीले पाउने भएको हुँदा परमेश्वरको असीम अनुग्रहबाट लाभ उठाइरहौं, जसद्वारा हामी डर र श्रद्धासहित परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य पवित्र सेवा चढाइरहन सक्नेछौं। २९ किनकि हाम्रो परमेश्वर भस्म गर्ने आगो पनि हुनुहुन्छ।
^ हिब्रू १२:२ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।